Umfazi waseFlorida Ubulala uBawo, Ntombi
Ngo-Agasti 1, 2015, u-Cheyanne Jessie waseLakeland, oneminyaka engama-25 ubudala, wabiza amapolisa ukuba abike ukuba uyise, uMark Weekly, 50, ulahlekile kunye nentombi yakhe uMeredith, 6. Wabanjwa waza wagwetywa ngokubulala kwabo ngaphantsi kwe-24. iiyure kamva emva kokuba izidumbu zabo zifunyanwe zilahleke kwindawo yokugcina ummelwane.
Nazi iziphumo zakutsha kwimeko yeCheyanne Jessie:
I-State ukuba ifune isigwebo sokufa e-Cheyanne Jessie Case
Sept. 9, 2015 - Abatshutshisi basePolk County banqwenele ukufuna isigwebo sokufa kwimeko yomfazi oneminyaka engama-25 ubudala waseFlorida onetyala lokubulala uyise nentombi yakhe.
UCheyanne Jessie unokujongana nokufa xa enetyala lokufa kukayise uMark Weekly kunye nentombi yakhe uMeredith.
U-Jessie uhlawuliswe ngamabini amabini obulali bokuqala kunye nenani elilodwa lokuphazamisa ubungqina . Ubanjwe ngaphandle kwebheyili.
Ngokutsho kophandi bakaPolish County Sheriff, u-Jessie wathatha isibhamu kunye nomkhwa endlwini kayise ngoJulayi 18 waza wadubula uyise waza wamgwaza intombi yakhe. Washiya imizimba phantsi komzi iintsuku ezine.
Amapolisa athi ubuyele endlwini kaJulayi ngo-22, wachaza i-asele yakhe phantsi kunye nefosholo waza wawafaka emigodini yokugcinwa kweplastiki, eyayifihla emva kwendawo yokugcina impahla eyayingumnikazi wendawo, owayehlala eholide ngelo xesha.
Abatshutshisi abazange bathethe ngokuthe ngqo ukuba kutheni baceba ukufumana isigwebo sokufa.
Umfazi uhlawulwe ngokubulawa kukaYise kunye nentombi yakhe
Agasti 2, 2015 - Owesifazane oneminyaka engama-25 ubudala waseFlorida uhlawuliswe ngamacala amabini okubulala emva kokubiza amaphoyisa waza waxelela uyise nentombi yakhe elahlekileyo.
UCheyanne Jessie usolwa ngokubulala intombi yakhe eneminyaka engama-6 uMeredith kunye noyise oneminyaka engama-50 ubudala, uMark Weekly.
Abasemagunyeni bathi iinjongo zokubulala zazingathi zibuhlungu nje ngokuba ulwaphulo-mthetho ngokwawo: unina ongatshatanga, osebenza njenge-cashier kwivenkile enkulu yebhokisi, akazange afune ukuba intombi yakhe iphazamise ubudlelwane bakhe nentombi entsha.
"Ayikho into embi ngaphezu kokubulawa komntwana , ngaphandle kokuba yenziwe ngumzali, kwaye yiloo nto esiyibonile," kusho uPolk County uSheriff uGrady Judd kwinkomfa yenkampani yeenkomfa.
USheriff Judd waba nemvakalelo njengoko wabonisa igxu likaJessie lokudubula kumaphephandaba.
Ulo bubuso kwaye lona amehlo ombulali obandayo , "kusho uJudd. "Akababulali nje kuphela, kodwa wawashiya kwindawo yokuhlala ngenxa yentsuku ezininzi kwaze kwaba nzima ukuba ahambe."
UJudd uthe uJessie akazange abonise ingqondo ngexesha lokudliwano-ndlebe nabaphenyi kwaye waqhubeka nokusebenza esitolo esithengisayo esithe sithengisa xa izidumbu zamalungu entsapho zihlalisa.
"Asinakuqonda engqondweni yethu ukuba umntu unokubulala njani intombazana yakhe eneminyaka engama-6 ubudala kunye nokubulala uyise ," kusho uJudd. "Kodwa yile nto akwenzayo kwaye akazange abonise ingqondo."
Ubulewe ngoJulayi 18?
Kubungqina obufumaneka kwimeko yolwaphulo-mthetho kunye nokugcinwa kwamanzi, kunye nolwazi olufunyenweyo kwiintliwano-ndlebe kunye nomtyholwa, abaphandi baphonononga eli xesha lilandelayo:
Ngomhla wama-18 kaJulayi, u-Jessie wahlalisa intombi yakhe endlwini kayise. Kungaba kamva ngaloo mini okanye ngosuku olulandelayo, wangena kwingxabano noyise wakhe phezu komntwana waza wabulala bobabini.
"Ingaba ucinga ukuba uya kulahlekelwa le nkwenkwe, efuna kakhulu, ngenxa yentombi yakhe?" UJudd uthe. "Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi isizathu, akayithathi kuphela intombi yakhe kuyise kodwa ekugqibeleni uyabulala bobabini."
Ubeka amaBhunga kwiSheditri yokuSondeza
UJudd uthe uJessie ubuyile ngoJulayi 22, iintsuku ezine emva koko, wasebenzisa ifosholo ukususa izidumbu ezidilizayo ukusuka endlwini ukuya kwi-Chevy SUV. Wabeka imizimba kwiingxowa zokuzifihla, into ayeyifunayo ngokubukela umboniso wethelevishini " Ingqondo Yengqondo ," watsho kubaphandi.
Wazithabatha izidumbu kwindawo yokugcina igumbi malunga neeyadi ezingama-200 ukusuka kwindlu yangeveki eyayingumninimzi wakhe. Umnini-mhlaba wayehlala eholide kwaye ngaphandle kwedolophu.
Xa izalamane zaqala ukubuza imibuzo malunga nokuba yiyiphi iVeki kunye noMeredith, uJessie waqala ukuqalisa ibali labantu abalahlekileyo.
Uthe uyise wayefumene ukuxilongwa komdlavuza wamva kwaye wabalekela eGeorgia ukuba achithe iinyanga zakhe ezisele kunye nomzukulu wakhe.
'Izinto Ezingabonakali Ngesokudla'
UJessie wasebenzisa umnxeba wakhe ukuba atyathele isoka lakhe, ezenza ngathi ngeveki, esithi uneminyaka nje kuphela yokuhlala kwaye wayefuna ukuyichitha noMeredith. Kwiibhalo, "ngeveki" wanika uJessie kunye nesoka lakhe imvume yokuba athathe indlu kunye nezinto zakhe.
Kodwa, xa uJessie echazela konke oku kumapolisa, baqala ukukrokra ngokukhawuleza.
"Izinto azivumi ngokufanelekileyo.
UJudd uthe kwindlu yeveki kwakukho "iphunga elicocekileyo" ukuba uJessie uzame ukugxeka ngokubola inyama esele ekhitshini yokucoca kunye ne-raccoon efile phantsi kwevolanda. Amapolisa awazange akwazi ukufumana isilwanyana esifileyo.
Into abayifumeneyo, emva kokufumana umyalelo wokufuna uphando , yayimatshwayo e-slash egazini enegazi. Kwakhona bafumana izidumbu ezisezantsi.
Ibango loKhuseleko loKhuseleko
Njengoko udliwano-ndlebe lwaqhubeka, ibali likaJessie laqala ukutshintsha yonke imihla, uJudd uthe. Uthi usebenze ngokuzikhusela.
UJessie utshele abaphandi ukuba uyise wazama ukumbetha, kodwa wakwazi ukuzimela ngokuqeqeshwa kwezemidlalo ezifundiswa nguyise wakhe omtsha. Kamva indoda yamxelela amapolisa ukuba wayengazi ubugcisa bokulwa.
"Ucinga ukuba uthola umkhonto kude noyise emva kokuba elwa naye, ehlasele ngengozi," kusho uJudd.
"Akukho nobungqina obuxhasa naluphi na olu."
UJudd uthe ngendlebe-ndlebe, uJessie akazange akhuphe intlungu ngenxa yokufa kukayise nentombi. Uthe kunye nesibhamu kwaye iqela lisetyenziswe ekubulaweni.
UJessie uye wabanjwa kwelinye ilizwe ngenxa yokuhlaselwa kunye nesoka lomkhwa.
Indlela yokuSondeza i-Pet Petilliillies
Ukungena kwi-Fuel Injection
I-Pyramid ye-Sex-Age kunye nePramramids yabantu
Iimvanoveli zokuHluma zeNkcazo eziNgcono
Yintoni i-Essay Essay in Composition?
Ifilimu Yokuqala Ethulekileyo: I-Great Train Train
Iidrama zezona ziDlala eziPhambili
Amagunya okuThunywa aseMelika e-Hajj nee-Umrah
Indlela yokudibanisa "i-Avancer" (ukuya phambili)
UThemis --kazikazi wezoBulungisa